Wararka - Afar faa iidooyin tiknoolajiyada daabacaadda ah ee loo yaqaan 'piezoelectric inkjet'
Sida aan wada ogsoonahay, tiknoolajiyada kuleylka kuleylka ah ayaa ku adkaatay suuqa weyn ee daabacaadda inkjet sanado badan. Xaqiiqdii, tiknoolajiyadda inkzoelectric inkjet waxay dejisay kacaan ku saabsan tikniyoolajiyadda inkjet. Waxaa lagu dabaqay daabacayaasha desktop muddo dheer. Horumarinta iyo bisaylka tiknoolajiyada, daabacadaha waaweyn ee loo yaqaan 'piezoelectric inkjet' ayaa sidoo kale soo baxay sanadihii la soo dhaafay.
Sida magaca ka muuqata, mabda'a tiknoolajiyada inkjet ee xumbada kuleylka waa in la isticmaalo iska caabin yar si dhaqso ah loogu kululeeyo khadka, ka dibna loo soo saaro goobooyin si looga saaro. Mabda'a 'piezoelectric inkjet' wuxuu adeegsadaa kareemka loo yaqaan 'piezoelectric crystal' inuu saameyn ku yeesho isla markaana uu ku sameeyo oscillate diaphragm ku go'an madaxa daabacaadda si khadadka ku jira madaxa daabacan loo soo saaro.
Laga soo bilaabo mabaadi'da kor ku xusan, waxaan ku soo koobi karnaa faa'iidooyinka tiknoolajiyada pezoelectric inkjet markii lagu dabaqo hawlgallada daabacaadda qaab-ballaaran:
(1) La jaanqaadi kara inbadan
Isticmaalka nozzles-ka loo yaqaan 'piezoelectric nozzles' waxay noqon kartaa mid aad u jilicsan marka la dooranayo daaqadaha qaabab kala duwan. Maaddaama habka inkjet xumbo kulul uu u baahan yahay in lagu kululeeyo khadka, ka kooban kiimikada khadku waa in si sax ah loogu waafajiyaa kaydadka kaydka. Maaddaama habka inkzoelectric inkjet uusan u baahnayn inuu kululeeyo khadka, xulashada khadku wuxuu noqon karaa mid dhammaystiran.
Muuqaalka ugu wanaagsan ee ka faa'iideysigan waa adeegsiga khad midab leh. Faa'iidada midabka midabka midabku u leeyahay ayaa ah inay iska caabbiso shucaaca UV marka loo eego dheeha (Dye ku saleysan) khad, waxayna ku sii socon kartaa muddo dheer bannaanka. Waxay yeelan kartaa astaamahan sababtoo ah maaddooyinka midabbada ee midabka midabka leh waxay u muuqdaan inay isku urursanayaan kooxo. Ka dib markii walxaha ay soosaaraan maaddooyinka midabku ay ku shubaan falaadhaha 'ultraviolet rays', xitaa haddii qaar ka mid ah molikuyuullada midabku ay baaba'aan, weli waxaa jira molikuyuullo midabbo ku filan oo ilaaliya Midabka asalka ah.
Intaa waxaa dheer, maaddooyinka midabbada midabku waxay sidoo kale sameyn doonaan shaashad birqaya. Shucaaca 'ultraviolet' hoostiisa, shaashadda 'crystal lattice' ayaa kala firdhi doonta oo nuugaysa qayb ka mid ah tamarta raajada, taas oo markaa ka ilaalinaysa qaybaha midabku waxyeellada. Astaantan ayaa si gaar ah muhiim u ah.
Dabcan, midabka midabka sidoo kale wuxuu leeyahay cilladaha uu leeyahay, tan ugu cad-cad ee ay tahay in midabku uu ka jiro gobolka qashinka ku jira. Qaybahaasi waxay kala firdhin doonaan iftiinka waxayna ka dhigayaan sawirka madow. In kasta oo soosaarayaasha qaarkood ay u isticmaali jireen midabbada midabka midabbada leh kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka waqtiyadii la soo dhaafay, sababo la xiriira nooca polymerization iyo roobab ka imanaya moleculeyaasha midabka, haddana waa lama huraan in qiiqyadeeda la xirayo. Xitaa haddii kululaado, waxay kaliya sababi doontaa khadadka. Isku-uruurintu waa ka dhib badan tahay in la fahmo, xirmidduna waa ka sii daran tahay. Ka dib sanado badan oo cilmi baaris ah, waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah maqaarka midabka oo hagaagsan oo loogu talagalay daabacadaha kuleylka kuleylka kuleylka ah ee suuqa maanta, oo ay ku jiraan kiimikada khariidada la hagaajiyay si loo yareeyo isu geynta qaybaha, iyo in badan oo shiidaya Fiican ayaa ka dhigaya dhexroorka mecoladaha midabka ka yar kan dhererka guud ahaan muuqaalka si looga fogaado kala firidhsan iftiinka. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaashu waxay soo sheegeen in dhibaatada xirmida ay wali jirto, ama midabka muuqaalka uu wali yahay mid fudud.
Dhibaatooyinka kor ku xusan si weyn ayaa loogu yareyn doonaa tiknoolajiyada inkzoelectric inkjet, iyo riixitaanka ka dhasha ballaarinta muraayaddu wuxuu xaqiijin karaa in mashiinka xayiran uusan xirneyn, iyo in feejignaanta khadku si sax ah loo xakameyn karo maxaa yeelay saameyn kuma yeelato kuleylka. Ama, khad qaro weyn ayaa sidoo kale yareyn kara dhibaatada midabka caajiska ah.
(laba) waxaa lagu qalabeyn karaa qalin adag oo adag Piezoelectric nozzles waxay dooran kartaa faashad leh waxyaabo adag oo adag. Guud ahaan, biyaha ay ka kooban tahay khadadka loo isticmaalo daabacadaha kuleylka kuleylka kuleylka waxay u baahan yihiin inay u dhexeeyaan 70% iyo 90% si ay u furnaadaan qiiqyadu isla markaana ula shaqeeyaan saameynta kuleylka. Waa lagama maarmaan in la oggolaado waqti ku filan oo ay khadku ugu qallajiso warbaahinta iyadoon dibadda loo faafin, laakiin dhibaatada jirta ayaa ah in shardigan looga baahan yahay inay ka hortagto daabacadaha kuleylka kuleylka kuleylka ah inay sii kordhiyaan xawaaraha daabacaadda. Sababtaas awgeed, daabacadaha pejielectric inkjet-ka hadda jira ee suuqa ayaa ka dheereeya daabacadaha kuleylka kuleylka leh.
Maaddaama isticmaalka nozzles-ka loo yaqaan 'piezoelectric nozzles' ay dooran karaan khad leh waxyaabo adag oo adag, horumarinta iyo soo saarista warbaahinta biyuhu xiraan iyo waxyaalaha kale ee la isticmaali karo way fududaan doontaa, warbaahinta la soo saarayna sidoo kale waxay yeelan kartaa waxqabad sare oo biyo-la'aan ah.
(2) Sawirka ayaa ka sii muuqda
Isticmaalka nozzles-ka loo yaqaan 'piezoelectric nozzles' ayaa si fiican u maamuli kara qaabka iyo cabirka dhibcaha khadadka, taasoo ka dhalanaysa sawir muuqaal oo cad.
Marka tiknoolajiyada inkjet-ka xumbada kuleylka ah la isticmaalo, khadku wuxuu ku dhacayaa dusha sare ee dhexdhexaadka qaab firidhsan. Mashiinka inkzoelectric inkjet-ka waxaa lagu daraa dhexdhexaadka qaabka Lay. Adoo adeegsanaya danab kuleylka 'piezoelectric crystal' iyo iswaafajinta dhexroorka 'inkjet', cabirka iyo qaabka dhibcaha khadku si fiican ayaa loo xakameyn karaa. Sidaa darteed, isla xallinta, soosaarka muuqaalka ee daabacaadda qalabka 'pezoelectric inkjet' wuxuu noqon doonaa mid cad oo ka sii lakab badan.
(3) Horumar iyo soo saar manfacyada
Adeegsiga teknolojiyadda inkzoelectric inkjet waxay badbaadin kartaa dhibaatada beddelidda madaxyada khadadka iyo gulufyada khadadka waxayna yareyn kartaa kharashyada. Tikniyoolajiyada 'pezoelectric inkjet', khadku lama kululayn doono, oo ay weheliso riixitaanka ay soo saarto meydka 'piezoelectric crystal', biiyaha piezoelectric ayaa si joogto ah loogu isticmaali karaa aragti ahaan.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadda Yinghe waxay u heellan tahay soosaarida daabacadaha dhejiska ah ee dhejiska ah oo dheereeya. Waqtigan xaadirka ah, daabacaadda 1.8 / 2.5 / 3.2 mitir ee ay soo saartay shirkadeena waxaa soo dhaweynaya inta badan macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Mashiinkayaga pezoelectric inkjet-ku wuxuu si toos ah u korsanayaa Nidaamka nuugista khadadka iyo nidaamka xoqida otomaatigga ah wuxuu hubiyaa in nozzles-ka aan la furin oo nozzles marwalba xaalad fiican ku jiraan. Nidaamku wuxuu bixiyaa 1440 qaabab sax ah oo sare iyo saxnaan sare leh. Isticmaalayaasha ayaa dooran kara qalab kala duwan oo loogu talagalay daabacaadda. Codsiga nidaamka qalajinta saddex-geesoodka iyo hawo-qaadista wuxuu ku guuleysan karaa isla markiiba Fididda iyo shaqada qalalan, qiimaha wax soo saarka aadka u hooseeya, si dhakhso leh oo fudud ayaad u heli kartaa soo noqoshada.